Fannaanadii qaranka Khadiija Dalays oo geeriyootay (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 15, 2018 11:34 b 0
Allaha u naxariistee fannaanadii caanka ahayd Khadiijo Cabdullaahi Cali (Dalays) ayaa saaka ku geeriyooday magaalada toronto ee caasimada dalka canada.
Toronto – Allaha u naxariistee fannanadii Khadiijo Cabdullaahi Cali oo ku magac dheer (Daleys), oo ka mid ahaa fannanadii ugu caansanaa kuwa Soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada toronto ee caasimada waddanka canada.
Waxaa geerida marxuumada xaqiijiyay eheladeeda .
Fanniinta soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Khadiija Dalays .
Axmed Xuseen Cabdulqaadir (Axmed Sheekeeye )ayaa warbixintan ka diyaariyey taariikh nololeedka Khadiijo Cabdullaahi Cali Camay (Dalays ).